Academic University Progressions Register
Networking Cyber Security Programming Embedded System Web Development
Certified Completion Diploma
To inspire your dreams with high-quality workmanship, connect with KBTC.( Inspire ad somnia vestra magna, qualis ignores opus ad coniungere KBTC.)
We pledge to foster youngsters in cultivating excellence and we thrive to promote by enabling each individual to reach greatest potential through pragmatic approaches.
We aspire to beacatalyst in contributing to ICT community through nurturing devotees. We aspire to be an evangelist in providing innovative security solutions by bringing the best individuals from academia and private sector.
We are driven in empowering diverse student body to acquire, demonstrate, articulate & value knowledge in order to enter and remain competitive inadynamic global community.We build on excellent collaborative partnerships with OTHM(UK Diploma),LinColn College(Malaysia) to endorse ample opportunities.
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Degree ဘွဲ့များကို International Universities များဖြစ်သော University of Central Lancashire (UClan) နှင့် LinColn University College (LUC) မှပေးအပ်ချီးမြှင့် မည်ဖြစ်ပြီး Degree ဘွဲ့ ရသည်အထိ (ပထမနှစ် ၊ ဒုတိယနှစ် ၊ တတိယနှစ်) ၃ နှစ်လုံးကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ KBTC Campus များတွင် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
BSc (Hons) Computing Degree တွင် မိမိဝါသနာပါရာ အထူးပြုဘာသာရပ်များကိုပါ ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် Software Engineering, Information Systems, Network Systems, Business Computing, Cyber Security, IoT & Embedded Systems စသည့်ဘာသာရပ်များကိုပါ လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရရှိမည့် Degree ဘွဲ့ များသည် UK Universities များမှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်မည့် ဘွဲ့များဖြစ်သည့် အပြင် UK ရှိ Universities များတွင်လည်း Officially ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် တက်ရောက်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရရှိသူများအတွက် KBTC College မှလည်း 5-Star Hotel တွင်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဖြင့် စီစဥ်ပေးအပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သော သင်ခန်းစာများ သင်ကြားပေးခြင်းကြောင့် ဘွဲ့ရပြီးပါက လုပ်ငန်းခွင်သို့ ချက်ချင်းဝင်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး ။
E-Library, Library, Networking Labs, Cybersecurity Labs များပါထားရှိပေးခြင်း ။
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော Campus နှင့် စုံလင်သော သင်ကြားရေး Facilities များ (Student Uniform, Locker Box, etc..)
ပါရဂူဘွဲ့ ၊ မဟာဘွဲ့ရ ဆရာဆရာများ ၊ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တစ်ခုစီတွင် Certified Instructors များမှ သင်ကြားပေးခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော သင်ကြားမှု ။
ဒုတိယနှစ် (Advanced Diploma in Computing) မှစတင်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် ဆင်းနိုင်မည့် On Job Training Program ။
Networking, Internetworking, Server Infrastructure, Virtualization, Cloud Computing အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များကို အခြေခံမှ Advanced Level များအထိ လေ့လာနိုင်သည့်အပြင် Professional ကျကျ Networking အထူးပြု Diploma များ Degree များအထိ လေ့လာနိုင်မည့် သင်ခန်းစာများ...
21 ရာစုတွင် မဖြစ်မနေလိုအပ်လာသော Cyber Security သင်ခန်းစာများ၊ Computer Security, Infrastructure Security နှင့်ပတ်သတ်သည့် Attack / Defense ဘာသာရပ်များဖြစ်သည့် Ethical Hacking, Pentesting, Exploit အစရှိသည့် သင်ခန်းစာများ...
Programming ပိုင်းကိုလေ့လာလိုသူများ ၊ Software Engineer, Programmer, Mobile App Developer, Software Architect တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် Advanced Level အထိ သင်ကြားပေးသော UK အသိအမှတ်ပြု Diploma နှင့် Degree များ ...
Robotics, IoT Devices, Control Systems, Smart Home Products များ ၊ Arduino, Micro-controller Devices နှင့် ပတ်သတ်သော Product Devices များ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်အထိ သင်ကြားပေးမည့် သင်ခန်းစာများ....
Enterprise Business များတွင် လိုအပ်သည့် Data Management, Analysis & Modelling, Business Intelligence တို့ကို အသုံးပြု၍ Business Planning လုပ်ခြင်း Business Solution များ ရှာဖွေခြင်း အစရှိသည့် Business Computing နှင့် Information Systems များအကြောင်း ...
Web Developer တစ်ယောက်အဖြစ် လျှောက်လှမ်းနိုင်မည့် Web Design & Development ပိုင်းသာမက Database, Cloud, DevOps & Web Security အစရှိသည့် Advanced Courses များပါသင်ကြားပေးမည့် Web Development သင်ခန်းစာများ ...
Campus 1 : N0.60, Sabel Chan 2nd street, Hlaing Township, Yangon.
Campus2: No.A2, Waggi Yeik Tar Street, Kamayut Township, Yangon
Copyright © 2020 KBTC College. All rights reserved.
Designed by Yamone Oo. Developed by Knowledge Lab Software Solution